Soomaaliya ma u baahan tahay xilligan lacag cusub? – Kalfadhi
Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa shaaciyay in dowladdu soo daabacayso lacag cusub oo uu dalku yeelanayo kahor dhammaadka sanadkan.
Waxay tani timid kadib markii hay’adda lacagta adduunka ay sheegtay inay taageerayso qorshaha lacagta cusub, waxayna ballan qaaday inay bixinayso kharashka ku baxaya oo ah inka badan 40 Milyan oo doolar.
Taageerada IMF-ta iyo qorshaha dowladda ee lagu soo daabacayo lacag cusub waxay daba socdaan hannaan lagu qiimeynayo dhaqaalaha dowladda oo leh dhowr weji iyadoo dowladdu ka gudubtay wajigii 2aad ee barnaamijka kormeerka shaqaalaha dowladda ee SMP oo uu sameeyo sanduukha lacagta adduunka.
Wasiir Beyle oo ka hadlayay qorshaha lacagta cusub, waxa uu cadeeyay in dalku yahay lacag la’aan iyadoo meesha uu ka baxay maamulkii lacagta islamarkaana aan laga baaqsan karin lacag cusub oo la soo daabaco.
“ Dal aan lacag laheyn dal ma aha, waa dal aan calan laheyn oo kale, lacag la’aan baan nahay,” ayuu yiri wasiir Beyle.
Qeybaha lacagta cusub ka kooban tahay waxaa markii hore soo baxday in laga soo daabacayo 5,000 iyo 10,000 oo Shilin Soomaali ah hase ahaatee guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya, Bashiir Ciise Cali, ayaa daaha ka rogay in lacagta cusub ka koobnaan doonto qeybaha 1,000 , 2,000 , 5,000, iyo 10,000 Sh.so.
Doodda ah ma u baahan tahay Soomaaliya xilligan lacag cusub waxay u muuqataa in la isku raacsan yahay sida ay Kalfadhi u sheegeen khubaro siyaasadda lacagta ah hase ahaatee waxaa barbar socda arrintan digniino badan, caqabado dhaw iyo kuwa fog.
Sababta abuureysa baahida ugu badan ee loo qabo lacag cusub, Maxamed Axmed Haadi oo ah xeeldheere dhaqaale waxa uu ku sheegay Shilinka Soomaaaliga oo duugoobay iyo maamulkii lacagta oo aan gacanta dowladda ku jirin.
Inkastoo baahida lacag cusub ay u muuqan karto xilligan mid taagan haddana waxa uu qabaa aragtida ah in aan lagu fududaan karin.
“ Ma sahlana in la soo daabaco lacag cusub, waxaa ka dhalan kara caqabado badan sida sicir barar iyo inay adkaato in la wada qaato, waxay u baahan tahay ka fiirsasho xooggan,” ayuu u yiri Mr Haadi isaga oo la hadlayay Kalfadhi.
Yaa leh mas’uuliyadda daabacaada lacag cusub?
Sida hadda muuqata, shaqada ugu badan ee qorshaha lacagta cusub waxaa ka shaqeynaysa wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Maxamuud Duraan Cabdilaahi oo ah xeeldheere siyaasadda lacagta ayaa u sheegay Kalfadhi in Bankiga dhexe ee Soomaaliya yahay hay’adda ugu sarreysa ee go’aan ka gaareysa haddii dalku u baahan yahay lacag iyo inkale.
Caqabadaha ka dhalan kara lacag cusub oo la soo daabaco
Waa digniinta ugu horreysa ee laga bixinayo qorshaha dowladda ee lacagta cusub. Khubarada sida Cabdulkariim Macalin Xuseen waxay la tahay in dowladdu ka fiirsato waxa ka dhalan kara lacag cusub oo aan lagu degdegin.
Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ah xoghayaha guddiga baarlamaanka ee miisaaniyadda iyo maaliyadda ayaa sheegay in amnigu saameyn ku lahaan doonno lacagta cusub gaar ahaan goobaha dowladdu aysan ka talin oo ay adag tahay in laga qaato lacagta cusub ee la soo daabacayo.
Maxamed Axmed Haadi waxa uu tilmaamayaa in marka hore dowladdu isfaham ku saabsan lacagta cusub la gaarto madaxda maamul goboleedyada si ay u sahlanaato in lacagta looga hirgaliyo deegaanada ay maamulaan haddii aysan taa dhicin, waxa uu ka digay in maamulada qaar kahor imaan karaan lacagta cusub taasina dhalin karto jahwareer lacageed.
WD. Mahad Maxamed Cali
Ra’iisul Wasaare Rooble hambalyo ayuu mudan yahay ee hiifid ma mudna
Wasiir Cadaala: Waad gaartay himiladaadii ka hor geeridaada
Wasiir Osman Dubbe: Waxa aanu sagootinay wariye Cabdicasiis Afrika